Wararka Maanta: Jimco, Oct 11, 2013-Doomo ay la Socdaan Tahriibayaal Soomaali u badan oo kusii dhawaanaya Xeebaha Koonfureed ee dalka Talyaaniga
Aadan Sabriye oo u warrama BBC-da ayaa sheegay in lagu wargeliyay in tahriibayaasha doomahan la socda ay 120-qof oo ka mid ah yihiin Soomaali ah ayna ku jiraan 30 haween iyo 20 carruur ah.
Wariyaha ayaa sheegay in dadka doonidan la socda ay dhibaato xooggan ku haysato doonyaha dushooda, ayna badda ku jiraan maalintii saddexaad tan iyo markii ay kasoo ambabaxeen xeebaha dalka Liibiya.
Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya in 100 qof oo ka mid ah dadka doomaha saaran ay u dhasheen dalka Eriteriya, kuwaasoo ay ku jiraan haween iyo carruur, iyadoo laga baqdin qabo in doomahan ay ku dagaan badda.
Tahriibayaasha doomahan la socda ayaa waxay billaabeen inay codsadaan in gacan la siiyo si ay uga badbaadaan inay badda ku dhacaan, balse ciidanka Talyaaniga ayaa sheegay inaysan u tallaabi karin xeebaha Liibiya, iyagoo sugaya inay kasoo tallaabaan.
Arritan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo ciidamada badda Talyaaniga ayaa soo gabgabeeyay howl ay badda kaga soo saareen maydadka 300 oo qof oo tahriibayaal Afrikaan ah, kuwaasoo khamiistii lasoo dhaafay dooni kula dagtay xeebaha jasiiradda Lambaduse kaddib markii uu dab qabasday.
Sideeddii bilood ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay in tahriibayaal gaaraya 2013, 21,241 ay gaareen xeebaha Talyaaniga, iyadoo sannadkii hore 2012 ay iyaguna gaareen xeebaha Talyaaniga tahriibayaal tiradoodu tahay 15,570 sida lagu baahiyeen warbixin lasoo saaray.